Google Earth - Peeji nke 2 - Geofumadas
GPS na Google Earth na Imekota
Afọ 4 ka anyị nyochachara gvSIG na imekọ ihe ọnụ, obi dị anyị ụtọ ịhapụ akwụkwọ ọhụrụ site na Arnalichm, nzukọ nke ndị ọkachamara emepụtara iji bulie mmetụta nke ndị na-eme ihe enyemaka na enyemaka ndị ọrụ aka, ọrụ nyocha na ọzụzụ n'ọhịa nke mmiri ọ drinkingụ drinkingụ na nke Injinia Gburugburu. Anyị pụtara ...
Akụziri CAD / GIS, Google Earth / Maps, GPS / Equipment
Ebudatara m ụdị beta nke Google Earth 6.2.1.6014 ma na-akwado ihe onye ọrụ gwara m, enwere ụfọdụ mmelite na-atọ ụtọ. Ọ bụ ezie na enwere ihe ndị ọzọ, maka ebumnuche anyị akwụkwọ akụkọ anọ ndị a yiri ka ọ baara m uru nke ukwuu; Ọ bụ ezie na ụfọdụ n'ime nke a pụtara na mbipute 4, ọ dị ka ugbu a ha nwere ...
Plex.Earth download images from Google Earth Ọ bụ iwu na-akwadoghị?
Anyị ahụwo tupu ụfọdụ mmemme ebudatara ihe oyiyi na Google Earth. Nkọwa ma ọ bụ na ọ bụghị, ụfọdụ anaghịzi adị dị ka StitchMaps na GoogleMaps Downloader. N'ụbọchị gara aga, otu enyi m jụrụ m ma ihe Plex.Earth si na AutoCAD mebie iwu Google ma ọ bụ na ọ bụghị. Ihe okwu Google kwuru http://earth.google.com/intl/es/license.html (c) la…
Usoro GIS Online, na Spanish, ụfọdụ n'efu
Ọzụzụ Geospatial bụ ụlọ ọrụ ewepụtara maka ọzụzụ na okwu mmemme etinyere na Geographic Information Systems. N’oge na-adịbeghị anya ọ malitere izi ozi ọma na gburugburu ebe ndị a na-asụ Spanish, yana nkuzi dị otu a yana ndị nkuzi metụtara gburugburu ebe obibi. N'ime uru nke Ọzụzụ Geospatial, ewezuga eziokwu na enwere ike ịnata ọmụmụ n'asụsụ Spanish ugbu a:
Akụziri CAD / GIS, Geospatial - GIS, Google Earth / Maps
Naanị ụbọchị atọ ruo na njedebe nke 2011, enyere m ikike iji kpọtụrụ ma ọ dịkarịa ala ozi abụọ a ga-agbanwe ndụ anyị na 2012: 1. Microsoft na-azụta Bentley Systems. Dịka a nụrụ ya, Microsoft eruola nkwekọrịta ikpeazụ iji nweta isi nke Bentley Systems ruru na Bentley Infrastructure 500; ọnụego ahụ…
Oge ụfọdụ gara aga ekwuru m banyere Plex.Earth Ngwaọrụ maka AutoCAD, ngwa ọrụ na-atọ ụtọ na ewezuga mbubata, ihe oyiyi georeferenced mosaicking na ịkọwapụta nke ọma, ọ nwekwara ike ịme ọtụtụ usoro a na-ahụkarị na mpaghara nyocha. Oge a ka m chọrọ igosi ọgbọ nke akara akara sitere na Google Earth. Ma eleghị anya, eziokwu na ...
AutoCAD-AutoDesk, Apụta, Google Earth / Maps, topografia
Iji Google Earth me ihe onyonyo mere eme
Ọ bụ otu n'ime mgbanwe kachasị mma nke Google Earth mejupụtara na nsụgharị 5, nke, ka anyị na-ahapụ anyị ka anyị hụ afọ eserese bipụtara, na-eme ka ọ dịrị anyị mfe iji nke nwere mkpebi kacha mma ma ọ bụ dị mkpa maka ebumnuche anyị. N'ọtụtụ oge, n'ihi na ihe oyiyi kachasị ọhụrụ nwere igwe ojii na-ezochi ihe nke anyị ...
Sevilla na 3D, n'etiti atụmatụ ọhụrụ nke Google Maps
Google agbakwunyela ọdịnaya 3D ọhụrụ maka ikiri na Google Earth na Google Maps. N'ime obodo iri na asatọ emelitere, 18 dị na United States; ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ha niile dị n’ebe ọdịda anyanwụ na 13 n’ime ha na California: Foster City Palo Alto Redwood City Riverside San Diego Santa Cruz Sunnyvale Obodo ndị ọzọ bụ: Honolulu, (Hawaii) Las Vegas ...
9 Anya bụ saịtị na-anakọtara ihe oyiyi nke curiosities si Google Earth, kpọmkwem n'okporo ámá echiche (Street View). Ga-ewe oge iji chọọ ụdị ihe ndị a, mana nwata nwoke na-adọta ndị mmadụ. Ihe ndi umu nwoke ndia choro bu umu anumanu n'ihu igwefoto, umuaka ...
Google Earth / Maps, Ntụrụndụ / n'ike mmụọ nsọ
Geomap na njikọ ya na Google Maps
Oge ụfọdụ gara aga emere m nyocha beta nke Geomap, nke n'etiti àgwà ya kachasị mma nwere ikike ịmekọrịta echiche data ọ bụghị naanị na Google Maps, kamakwa Bing Maps, Yahoo Maps na Open Street Maps. N'adịghị ka ihe mmemme ndị ọzọ na-eme, nke na-ebubata njide ejikọtara ọnụ, Geomap nwere ...
PlexEarth, Ihe na-eweta 2.5 mbipute maka ihe oyiyi nke Google Earth
Enweela m atụmatụ ndị ọhụrụ PlexEarth na-eweta, nke a na-atụ anya na a ga-ekwupụta na njedebe nke Ọktọba 2011. Isi ihe mere ngwa ọrụ a ji nwee nnabata dị mkpa bụ na ọ na-edozi ihe mmemme ahụ enweghị ike CAD kachasị ewu ewu (AutoCAD) na ụwa ...
AutoCAD 2012 obodo 3D Google Earth PlexEarth
Georeferencing CAD file
Ọ bụ ezie na ọ bụ isiokwu dị mkpa maka ọtụtụ, ọ na-apụtakarị na ndepụta nkesa na ajụjụ Google. Ọ bụghị nke na-erughị, ihe enyemaka kọmputa na-anọ n'okpuru injinịa, Nrụpụta ihe na ihe owuwu ogologo oge ebe okwu gbasara ala nwere mmekọrịta gbakwasara ...
Obere ihu Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 ... Page 15 Next page